«Coupe des Nations 2016» : lasan’i Tahiti ny laharana voalohany | NewsMada
«Coupe des Nations 2016» : lasan’i Tahiti ny laharana voalohany
Ny ekipan’i Tahiti, nisy an’i Jean Manea, Robert Teng, Kevin Bocahut, Damas Make no nandrombaka ny amboara sy ny laharana voalohany teo amin’ny fiadiana ny «Coupe des Nations 2016». Fifaninanana natokana ho an’ireo firenena nihintsana teo amin’ny fifanintsanana isam-bondrona.
Resin’i Tahiti, tamin’ny isa 13 noho 9 teo amin’ny lalao famaranana i Kanadà, izay nahitana an’i Derlincourt, Yanick Laulhé, Rédouane Hammaouchane, Thomas Poulplot. Azo lazaina fa niady ny fihaonana saingy nanantombo teo amin’ny teknika ny ekipan’i Tahiti. Nifandimbiasana hatrany ny nitarika ny isa hatrany amboalohany.
Nanana olana kosa ry zareo Kanadianina, rehefa tafakatra teo amin’ny isa 8 satria vetivety foana dia niitatra ny isa teny amin’ny solaitra be. Nitarika tamin’ny isa 11 noho 8 ry zareo Tahiti. Nahazo isa iray indray anefa taorian’izay i Kanadà ary nihevitra ny mbola hanohitra saingy tavela teo.
Raha tsiahivina, ny ekipan’i Malezia, no lavon’i Tahiti, tamin’ny isa 13 noho 4 teo amin’ny manasa-dalana ary nampiondrika an’i Sina kosa i Kanadà, teo amin’ny ankatoky ny famaranana iray. Tamin’ny isa 13 noho 9 nisarahan’ny roa tonta.